Dhacdooyinkii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) – Radio Daljir
Luulyo 2, 2019 10:18 b 0
Radio Daljir oo xoogga saaraya, siina xoojinaya soo gudbinta wararka iyo waraysiyada iftiimaya xaaladihii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida, waxa uu asbuuc walba idiin soo gudbinayaa warar joogta ah oo ka warrama marxaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, dhan siyaasad iyo dhan dhacdooyin deegaanba.
Marxaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, sida ay nala qaysadeen wariyayaasha Daljir ee DDS iyo waliba bulshada deegaanada kala duwan ee gobolada DDS waa sida hoose:
1) June 24
Degmada Elele ee gobolka Shabeelle waxaa ka taagan xiisad dagaal oo u dhexeysa laba maleeshiyo beeleed, kana kala taagan deegaanada hoostaga Elele. Qaar kamid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaad hubeysan ay soo buuxdhaafsheen deegaanka.
Degmada Ismodaay ee xadka gobolka Doollo iyo gobolka Qorraxey waxaa iyana ka taagan xiisad kale oo ah mid sii xoogeysaneysa una dhexeysa laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeedo degaanka Ismodaay. Xiisadda ayaa salka ku heyso arrimo la xariira aanooyin qabiil, waxa ayna dadka deegaanku muujinayaan cabsi ah in uu dagaal mar kasta qarxi karo, dhaqdhaqaaqyada joogtada ah ee maleeshiyaadka hubeysan dartood.
3) June 25
Degmada Mir Khalifo ee gobolka Doollo oo ku taal duleedka magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doollo waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeyo laba beelood oo halkaas wada dega. Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalka ku dhintay illaa 10 qof, halka dhaawacuna uu yahay tiro intaas ka badan.
4) June 26
Degmada Mir Khalifo ee isla gobolka Doollo ayana waxaa dhaqdhaqaaq ka bilaabay Liyuu Booliska kaas oo dabajooga daminta dagaal beeleedkii deegaanka ee shalay.
5) June 27
Degmada Gallaadi ee gobolka Doollo ayaa sidoo kale waxaa ka biloowday dhaqdhaqaaq Liyuu Booliska si loo xaqijiyo amniga loona joojiyo colaadda sii fideysa ee u dhaxeysa beelaha wada degan bariga gobolka Doollo. Ciidamada Liyuu Booliska ayaa saldhigyo ciidan iyo bara kantarool ka sameyatay tuulooyinka Qorof, Uurmadag, Duuban, Janbacley, Bariscade iyo Qalloocan oo dhammaantood hoosyimaada degmada Gallaadi.
6) June 30
Degmada Alaale ee gobolka Sitti waxaa ayana weerar la beegsaday maleeyshiyaadka Canfarta, waxaana weerarkaas ku dhawaacmay 4 qof. Mid kamid ah dadka dhaawacmay ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Faarax Barre.
Diiwaanka wararka DDS
Dowlad Deegaanka Soomaalida 129 Wararka 18303